China gadzira pasi vinyl flooring Mugadziri uye mutengesi | Karlter
Chinhu: Vinyl Plank yakaoma kumashure akateedzana，namira pasi isina mvura anti kutenderera PVC plank pasi
1.Raw zvinhu zviri 100% zvakatipoteredza zvine hushamwari.
2. Anti-slip, Anti-mildew, High grade anti-abrasion uye anti-bhakitiriya.
3.Inodziya uye Inonyaradza.
5.100% Isina mvura uye Dhu-chiratidzo.
7.Sound Kubvisa uye Noise Kuderedza.
8.High-Elasticity, Yakakwirira Kuchengetedza.
10.Zvishoma zvekugadzirisa mutengo, hapana-wakisi inodikanwa.
11.Mavara akasiyana anopihwa kuti afananidze akasiyana mamiriro.
Zita Vinyl yemapuriro (LVT Yakaoma Kudzoka pasi)
Kukora kwebhodhi 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 5.0mm kana yakagadzirirwa
Pfeka ukobvu hutete 0.07mm, 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.5mm, 0.7mm senguva dzose
Pamusoro Texture Yakadzika embossed, Chiedza chakashongedzwa, Crystal, Handscraped.
Kuiswa Gira pasi
(Kana Yakagadzirirwa) 6 "* 36" 152 * 914.4
Chii chinonzi Glue pasi LVT?
Gira pasi pasi Luxury Vinyl Tiles inowanzo kuve neyakaonda mutete dhizaini. Inoda kunamirwa pasi panguva yekumisikidzwa kuitira kuti ipe yakagadzikana, inogara-nguva pasi. Iwe unofanirwa kuona kuti subfloor urikuisa pairi, yakati sandara uye yakaenzana. Kana paine chero kusakwana mune subfloor, irikuratidza mune yako nyowani LVT pasi. Saizvozvowo, iwe unozofanirwa kuona kuti subfloor haina kutenderedza hunyoro usati wasunga mataira pasi.
Sezvo tile imwe neimwe ichizoda kunamirwa pasi, zvinogona kutora nguva yakareba kuti uise iyi mhando yevinyl yemhando yepamusoro. Zvinogona zvakare kuve zvakaoma kuzviita iwe wega, nevaridzi vedzimba vakawanda vachisarudza kuhaya nyanzvi kuti ikwane ivo.
Iwo mabhenefiti akakosha eGlue pasi LVT anosanganisira
• Zvimwe zvinodhura pane kubaya kupindirana LVT
• Kuwedzera kugadzikana
• Zvishoma zvingangove zvakakanganiswa neshanduko mune hunyoro uye tembiricha
• Inogara yakasimba munzvimbo dzinorema dzemotokari
Kunyangwe pasi peLVT isingawanzo kukanganiswa neshanduko muhunyoro uye tembiricha senge pasi pehuni, inogona kuunza mamwe matambudziko pasi. Nekudaro, kana iwe uri kuronga nezvekuisa munzvimbo dzakakwira-hunyoro, Glue pasi kazhinji ndiyo iri nani sarudzo.
Pashure: EIR SPC vinyl flooring
Zvadaro: yakasununguka yakaisa vinyl pasi